Kedu ihe bụ CRO? | Martech Zone Mkpebiri
Martech Zone » Mkpebiri » Acronyms na-amalite na C	» CRO
CRO bụ okwu mkpọ okwu maka Ntughari Ọnụego Mgbanwe.
Acronym a bụ nkenke maka ileba anya n'ebumnobi na atụmatụ ịzụ ahịa gụnyere weebụsaịtị, ibe ọdịda, mgbasa ozi ọha na eze, na CTA iji meziwanye ọnụ ọgụgụ atụmanya ndị a gbanwere ghọọ ndị ahịa.
CRO bụ okwu mkpọ okwu maka Onye isi ndị nnata ego.
Onye isi nke na-elekọta ma ahịa na ahịa ahịa n'ime ụlọ ọrụ.